Manni hidhaa Qiliinxoo gubataa jira; haalli Baqqalaa Garbaa fa'a yaachisaa ta'era - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Manni hidhaa Qiliinxoo gubataa jira; haalli Baqqalaa Garbaa fa’a yaachisaa ta’era
Mana hidhaa Qilinxoo keessa ob.Baqqalaa Garbaa fi hidhamtoonni siyaasaa Oromoo heddutu jira
Manni hidhaa Qiliinxoo ibiddaan barbadaayaa jiraachuun isaa gabaafamaara. Sababa ibiddaa fi dhukaasaan namoonni 20 du’uu isaaniiti kan maddi garagaraa argisiisutti jiran. Hireen Ob.Baqqalaa Garbaa fi Oromoota biraa maal makka ta’e ammas hin baramne. Ibiddi kuni akkamittii fi eennuun akka qabate ammatti beekuun hin danda’amne. Mooraa mana hidhaa keessatti, ibiddaan duratti, dhukaasni yeroo dheeraadhaaf ture geggeeffamaa turuun isaas hubatameera.
Mana hidhaa Qiliinxoo keessa ob.Baqqalaa Garbaa fi hidhamtoonni siyaasaa Oromoo heddu akka jiran ni beekama.
Itoophiyaa keessatti ibiddi yeroo addaddaatti manniin hidhaa barbadeessaa ture. Baatii muraasa dura gubatiinsa mana hidhaa Ambootiin lubbuun hidhamtoota hedduu galaafatamte. Guyyaa muraasa dura ammoo naannoo Amaaraatti manniin hidhaa Goondarii fi Dabrataaboritti manniin hidhaa gubatan. Achittis lubbuu hidhamtoota hedduutu ibiddaan nyaatame.
Mudannoo kana duraan manniin hidhaa biyyattii keessaa akkamittii fi eennuun akka gubataa turan gama mootummaan wanti jedhame dhabamuun isaa mootummichi harka keessaa qabaachuu hin oolle gara jedhutti ummata geesseera. Tooftaa manni hidhaa gubate jedhuun lubbuu hidhamtoota siyaasaa baasaa jira shakkiin jedhus baay’inaan dhagayamaa dhufeera.
Lubbuu hidhamtoota Oromoo waaqni haa tissu jenne.
mana hidhaa Qiliinxoo
mana hidhaa Qiliinxoo gubachuu
Previous articleAbbootiin Gadaa Oromoo mootummaa Woyyaanee cimsanii balaaleffatan
Next articleAjjeechaan Itoophiyaa keessatti geggeeffamaa jiru baay’ee yaachisaadha, jetti Ameerikaan